Hot UKWAKHA umfutholuketshezi Cindezela
Umshini wokugoba we-CNC
Ithonya lokushisa lemikhiqizo yokubumba ye-SMC
Ushintsho lokushisa ngesikhathi senqubo yokubumba i-FRP luyinkimbinkimbi ngokwengeziwe. Ngoba ipulasitiki ingumqhubi wokushisa ompofu, umehluko wezinga lokushisa phakathi nendawo nendawo onqenqemeni lwento mkhulu ekuqaleni kokubumba, okuzobangela ukusabela okwelaphayo nokuxhumanisa kungabi ...
Izinzuzo zokubumba ze-SMC zezimoto kanye nokusetshenziswa
Izingxenye zokumboza izimoto ze-SMC zinezinzuzo zokumelana nokugqwala, ukumelana nokuguga, ukuhlanza okulula, isisindo esincane, imodi ephezulu yokunwebeka, njll. Izingxenye zokumboza ngezimoto (ngemuva kwalokhu ezobizwa ngezingxenye zokumboza) zibhekisa kumotobil ...
Umehluko phakathi kokushisa kwepuleti kagesi kanye nokushisa okushisa kawoyela
Ukuhlaziywa kwezinkinga ezinkulu nezixazululo zepuleti lokushisa kagesi: 1. Izinga lokushisa kwepuleti lokushisa kagesi alikwazi ukuhlangabezana nezidingo a. Ngokuthuthuka okuqhubekayo kwenqubo yamanje, okokusebenza akukwazi ukuhlangabezana nezidingo zokubunjwa komkhiqizo; b. Ukufana kokushisa ...
I-2020 China Composites Expo
AbakwaZHENGXI bazobamba iqhaza embukisweni wangomhlaka 02/09 / 2020-04 / 09/2020, bamukelekile ukuvakashela idokodo lethu i-A1327. "I-China International Composite Materials Exhibition" ngumbukiso wezobuchwepheshe ohlanganisa izinto eziningi ngobukhulu futhi onethonya elikhulu esifundeni sase-Asia-Pacific. Kusukela ku ...
ZHENGXI SMC Amanzi Tank Molding Production Line Qala Ngo Yaan
Ithangi lamanzi le-SMC wuhlobo olusha lwethangi lamanzi elisetshenziswa emazweni omhlaba. Ihlanganiswe yibhodi yethangi lamanzi esezingeni eliphezulu le-SMC. Kubonakala ngokusetshenziswa kwe-resin ebangeni lokudla, ngakho-ke ikhwalithi yamanzi yinhle, ihlanzekile futhi ayinakho ukungcola; inezici zamandla aphezulu, isisindo esincane ...
Izicelo ze-SMC BMC
Leli bhukwana lihlelela ukuchaza i-Sheet Molding Compound (SMC) ne-Bulk Molding Compound (BMC), ukwakheka kwazo, izici zazo, ukucubungula kwazo, ukusetshenziswa kwazo ekugcineni nokuvuselelwa kwazo. Kunikezwa izincomo zokuthi ungayithola kanjani imiphumela emihle nokuthi ungazikhulisa kanjani izinzuzo lezi eziyingqayizivele ...
Yiziphi izici eziyinhloko zensimbi yokushaywa kwezimoto ezijulile ezinyathela imboni yezimoto?
Ingxenye yensimbi yokudweba ejulile yensimbi iyindlela yokwakha into yokusebenza (ingxenye ecindezelayo) yesimo nosayizi oyifunayo ngokusebenzisa amandla angaphandle kupuleti, umucu, ipayipi, iphrofayli, nokunye okunjalo ngabezindaba nofele (isikhunta) ukudala ukuguqulwa kwepulasitiki noma ukwahlukana Wokushaya futhi UKWAKHA kukhona ...
Le nkampani ihlanganisa indawo engamamitha-skwele angama-45,608, kufaka phakathi indawo yokusebenzela enzima engama-30,400 metres ayisikwele. Kungumsebenzi omkhulu omkhulu [...]